Omaly no notokanana tamim-pomba ofisialy ny fotodrafitrasa ka nahafantarana fa niainga avy tamina olana nosedraina tovovavy kely zanak’olona sahirana monina eny Ampitatafika nandranto fianarana teo anivon’ny LMA Ampefiloha no nanosika ny Ben’ny tanàna Rado Ramparaoelina hanangana ity lisea iray ity. Torana teny an-dalana mantsy io tovovavy kely io raha niainga tany an-tokantranony tamin’ny 04 ora maraina indray andro, tsy nisakafo nefa mbola mandeha dia an-tongotra ihany ka sendra ny ben’ny tanàna. Tsy misakafo ihany koa izy ny atoandro ary mbola mandeha dia an-tongotra mamonjy fodiana eny Ampitatafika amin’ny hariva. Reraka noho izany izy ka torana. Nomen’ny Ben’ny tanàna fanampiana izy taorian’izay ary nanomboka nivavaka ity farany ny amin’ny hahafahany manangana lisea ao Ampitatafika hanampiana ireo zanaky ny sahirana. Tena vitany tokoa ny fotodrafitrasa mitentina 90 tapitrisa Ar, ahitana efitrano 16, misy mpampianatra 42 sy mpandraharaha 20. Tsy ampy anefa ny efitrano fianarana satria dia miisa 860 ny mpianatra, tsy mbola vita ihany koa ny tamboho raha mbola andrasana ny efitrano hanaovan’ny mpianatra informatika. Ezaka hotratrarin’ny provisera sy ny ben’ny tanàna ny mbola hanohizana hatrany ny asa fanamboarana, indrindra ny hahatonga ity lisea ity hitana ny laharana voalohany amin’ireo lisea miisa 436 eto amin’ny Faritra Analamanga. Hotoloran’ny kaominina vola ny lisea raha tanteraka izany ary homena 1 tapitrisa Ar avy isan’olona ihany koa ireo ankizy mpianatra lohalaharana amin’ny fahazoana ny diplaona baka sokajy A, C ary D hahafahan’izy ireo manohy ny fianarany eny amin’ny anjerimanontolo.